Ukuthunyelwa kwiindawo zokugcina iimpahla zeAmazon FBA kuthathwa njengongeniso lweB2B kwilizwe lokuya. Ngaba uyafuna ukuthumela uluhlu lweempahla kwindawo yokugcina izinto yaseAmazon ngaphandle kwe China? Unokuziva ukhathazekile, umenzi akaze alungiselele iimpahla ze-FBA, kuya kufuneka ucacise kaninzi. Ngaphaya koko, ukungenisa kwamanye amazwe kunzima kakhulu kwaye kuhlala kuyintloko. Ngoku silapha ukukunceda. Sinikezela abathengi ngeenkonzo zokuthatha umqhubi kwizixeko ezikhulu e-China, iilebheli zemveliso, ukucocwa kwamasiko ...
Ukucaciswa kwamanye amazwe yenye yezona zinto zibalulekileyo kurhwebo lwamanye amazwe. Uninzi lwe-eBay / AliExpress / umthengisi waseShopiy ukuhambisa iimveliso zabo kulo naliphi na ilizwe. Uluhlu olukhulu lweenkonzo eziphakanyiswe nguGuangzhou Ontime zikunika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo ukuhambisa iimpahla zothutho lwakho. Ngaphandle komoya kunye nolwandle uthutho, inkonzo yothutho ebonakalayo yenziwa ukuphendula kulindelo lwakho kunye neemfuno ngokukhawuleza. Inkonzo yokubonisa inikezela ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ...
Ukuhanjiswa ngenqwelomoya ovela eTshayina- Amaxabiso oMoya oMkhulu wamazwe ngaMazwe Cinga kunye ubuDlelwane ligama elisetyenziswe kakhulu, kodwa liyahamba ngokuchaza iinkonzo zethu ezijolise kubathengi. Sizama ukuzisa okuninzi ngakumbi kubudlelwane kunokuba yindlela nje yokufikelela kubathengi bakho kwihlabathi liphela. Ukuhanjiswa kwempahla kumazwe aphesheya kuhlala kuyinto yokulinganisa phakathi kwexesha, indleko kunye neenkxalabo esingqongileyo. Eso sesinye sezizathu zokuba iinkampani zikhethe ixesha lokuphumla le-GZ ngeendleko ezisebenzayo, ezigudileyo ...
Ngaba ukukhetha kwethu kunye nokupakisha kuncede njani abathengi? Sinikezela ngeenkonzo zephakheji epheleleyo yokuhlangabezana neemfuno zakho zeshishini! I-99.6% yokuchola inqanaba lokuchaneka kudityaniswe ngokupheleleyo newebhusayithi yakho kunye namaqonga athengiswayo Ukulawulwa kwestokhwe okuzenzekelayo kuhlaziywa kwenkonzo yemini enye Imiyalelo epakishwe ngokomgangatho Ifunyenwe Kukho iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo malunga nendlela esizifumana ngayo iiodolo zakho zokuqhutywa. Inketho ekhethwayo kuninzi lwabathengi bethu kukuvumela ukudityaniswa kwe-API yeWarehouse Mana yethu ...
Uthutho lwendlela nololiwe oluvela e-CHINA luye e-yuropa - Iirhafu kunye nexesha lotshintsho | ISICWANGCISO SAMAHHALA | UKUTHUNYELWA KWISINO Iinkonzo zikaloliwe Ngexesha lokuhamba leentsuku ezili-16 ukuya kwezingama-20, uthutho kaloliwe lukhawuleza kakhulu kunothutho lolwandle oluthatha ukuya kwiintsuku ezingama-35 ukufikelela kumazibuko aseFrance eLe Havre naseFos-Marseille (njengemizekelo). UKUJIKISWA KOMJOLO KUKHULA KAKHULU KUNOKUQWALASELA ULWANDLE, KODWA UQHUBEKILE UTSHEKILE KUNOKUTHUTHA UMOYA. Le ndlela yothutho ifanelekile kwiimveliso zexabiso eliphezulu ezinje ngezithuthi, i-elektroniki ...
Nika inkonzo yokugcina efanelekileyo, ekhuselekileyo nesimahla e China Sine 3000 + square metres yokugcina e Guangzhou, Nikeza ukusetyenziswa simahla iinyanga ezintathu kubathengi abatsha, kunye nakwasimahla emva kwe3months ngokusekwe kwi-60Pcs yeeodolo zokuhambisa ngenyanga, 3000m² yokugcina unokuhlangabezana nesidingo sakho sokukhula kwempahla, ngokukhawuleza uqhubekise iodolo yakho kwaye ulungiselele ukuhanjiswa. Indawo yokugcina izinto ukugcina isitokhwe sakho sikhuselekile, sigcwalisiwe ngokhuseleko lwe-24/7 kunye ne-inshurensi. Inyathelo1: Indawo yokugcina indawo yokugcina impahla ...
Umdlulisi weNkonzo ye-FedEx esuka e-China ukuya kwi-Fed Ex Ship ye-DHL yokuHanjiswa kwaMazwe ngaMazwe e-Philippines
Izixhobo ezisebenza kakuhle, abasebenzi abanengeniso, kunye neenkonzo ezingcono emva kokuthengisa; Sikwalusapho olukhulu olumanyeneyo, nabani na uhlala nexabiso lombutho "umanyano, ukuzimisela, ukunyamezelana" kwiNkonzo yokuThunyelwa kweFedEx Ukusuka e-China ukuya kwiFed Ex Ship DHL yamazwe e-Philippines yokuThumela amaHlabathi, Siza kwenza iinzame ezinkulu eziza kunceda ekhaya nakwamanye amazwe. Abaza kuba ngabathengi, kwaye bavelise inzuzo kunye kunye nokuphumelela phakathi kwethu. Silinde ngolangazelelo ...
Eyona ndlela ineendleko zokuhambisa izixa ezikhulu. Ngokusebenzisa ubudlelwane bethu obomeleleyo kunye nobude bexesha elide, i-GZ Ontime ikunika izisombululo eziguqukayo, ezinokuthenjwa nezikhuselekileyo zothutho lolwandle. Abathengi babuxabisile ubuchule bethu kuthutho lwaselwandle lwamazwe aphesheya ukuhambisa uthungelwano lwehlabathi oluquka amazwe nemimandla engamashumi amane anesithandathu. Babuxabisile ubuchule bokunxibelelana nezinye iinkonzo ezinjengokuthumela iimpahla ngenqwelomoya, uthutho oluninzi, iinkonzo zokuwela umda, okanye urhwebo lwendlu yamasiko. Mor ...
Umncedisi wokuhambisa ngenqanawe Izibonelelo zomthwalo woosomashishini abanomdla, iDropshipping yimodeli yeshishini entle kuba kulula ukufikelela kuyo. Ngokuthumela ngokuthe ngqo, ungavavanya ngokukhawuleza imibono eyahlukeneyo yeshishini ngeziphene ezinqongopheleyo, ekuvumela ukuba ufunde lukhulu malunga nendlela yokukhetha kunye nokuthengisa iimveliso ezifunwayo. Kukho ezinye izizathu zokuba ukuhanjiswa ngokuthe ngqo kuthandwe kangaka. 1. Imali engaphantsi efunekayo Mhlawumbi esona sibonelelo sikhulu sokuthengisa ngokuthe ngqo kukuba unokuvula ivenkile ye-e ...
Iinkonzo ezongezwe ngexabiso Sebenzisa iinkonzo zethu zokongeza ixabiso ukwakha uphawu lwakho! Ukunyuswa kweBrand 1. Nceda ungeze ukuthengisa kunye nokugcina abathengi bakho. 2.Pakisha imveliso kwakhona kwibhokisi yokupakisha eyenziwe ngendlela oyithandayo. 3. Ukufakwa kunye nokudibana kunokuphucula ukuhambisa kwakho kunye nokwenza lula inkqubo yokuhambisa. 4. Ukulebhelisha yinkqubo enzima kodwa ebalulekileyo, ke siya kuyithathela yona kwaye sibeke iilebhile ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba iimveliso zakho ziyabonakala. Ukubonelela ngeCha ...
Isisombululo sokuthumela ngeposi Siqonda ngenene ukuba isisombululo seposi sihlala sikhetho lwangaphambili kwishishini le-e-commerce njengoko lisonwabela iqondo eliphantsi. Ukwanelisa ibango lomrhwebi ohlukeneyo, sisebenza ngeofisi ezininzi zeposi kule minyaka idlulileyo kwaye siqhubeka nokuphelisa inkonzo embi amaxesha ngamaxesha. Ngoku ezinye zezona zilungileyo. I-China Post i-China Post yahlulahlulwe yangumhlaba kunye neepasile ezibhalisiweyo. Yinkonzo yepasile yamanye amazwe yeepasile ezinobunzima obungaphantsi kwe-2KG. I-China Post kunye ...
I-DHL FedEX UPS ichaza inkonzo yokuhambisa ngenqanawa ukusuka e-China ukuya e-USA
Le yi-GZ yeOptime Logistics, singummeli wehlabathi kunye nobungcali ovunyiweyo ngumphathiswa wezorhwebo kuzwelonke.
Iofisi yethu ngokubanzi ebekwe eGuangzhou, GZ ixesha lokuphumla lijolise ekunikezeleni ngeenkonzo zodidi lokuqala kubathengi bethu abaxabisekileyo kwihlabathi liphela. Iinkonzo zethu zigubungela i-AMAZON FBA SHIPPING, uthutho lolwandle, uthutho lomoya, ukugcinwa, ukubhengezwa kwamasiko, ukuthuthwa ngaphakathi, ukuthengisa, ukuthumela ngaphandle kunye nokungenisa. Nxibelelana nathi namhlanje! Iqela lethu elinobuhlobo nelinobungcali elinokuphatha yonke imibuzo xa ufuna.